Truth Post Nepal | अचम्मको रियालिटी शो: जसमा एक-अर्काको लुगा फुकाल्नुपर्छ (भिडियोसहित) - Truth Post Nepal अचम्मको रियालिटी शो: जसमा एक-अर्काको लुगा फुकाल्नुपर्छ (भिडियोसहित) - Truth Post Nepal
अचम्मको रियालिटी शो: जसमा एक-अर्काको लुगा फुकाल्नुपर्छ (भिडियोसहित)
पछिल्लो समय टेलिभिजन च्यानलहरुमा रियालिटी शोको बहार छ । तपाईंले पनि धेरै किसिमका रियालिटी शो हेरिसक्नु भएको होला । तर एउटा अचम्मको रियालिटी शो भने कमैलाइ थाहा छ ।
अष्ट्रेलियाको टिभी च्यानल एसबिएसमा टेलिकास्ट शुरु भएको यो रियालिटी शोको नाम ‘अनड्रे’स्ड’ छ । यसको काम पनि नाम अनुसारकै छ । यसमा आपसमा अपरिचित दुई व्यक्तिहरुलाई एक-अर्काको लुगा फु-काल्नु पर्छ ।
प्रत्येक हप्ताको सोमबार टेलिभिजनमा आउने यो रियालिटी शो मा यस्ता जोडीहरु हुन्छन् जो विगतमा कहिल्यै भेट भएका थिएनन् ।पहिलो भेटमै उनीहरुले एक-अर्काको लुगा फुका’लेर नां*गै बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरु एउटै ओ’छ्यानमा आधा घन्टा एक-अर्कालाई अं*गालेर सु’त्नुपर्छ । सुत्ने क्रममा शा*रीरिक स*म्वन्ध भने राख्न पाइदैन । बरु उनीहरुले एक-अर्कालाई म’साज चाहिँ गर्न सक्छन् ।
सुत्ने क्रममा प्रत्येक जोडीले रोमा*न्टिक र यौ*नजन्य सवालजवाफ गर्नुपर्छ । जस्तैः पहिलोपटक से*क्स ग’र्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? के तिमी असल चु*म्बनकर्ता हौ ? तिम्रो कति इन्चको छ ? आदि । आधा घन्टाको सवालजवाफपछि दुई जनाले एक-अर्कालाई मन पराएको खण्डमा उनीहरु प्रेमी-प्रेमिका बनेर बस्न सक्छन् । अन्यथा शो छोडेर बाटो लाग्नुपर्छ ।
यस शोको धेरैले आ’लोचना गरेका छन् । केहीले समर्थन पनि गरेका छन् । एसविएस च्यानलका निर्देशक मार्सल हेल्ड दर्शकहरुले पहिलो एपिसोड अत्यधिक रुचाएको बताउँछन् । ‘यसमा गलत केही पनि छैन, बरु दुई अपरिचित व्यक्तिले एक-अर्कालाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाउने, बताउछन ।
नायिका सुष्मा कार्कीको हट अवतार (फोटोफिचर)
२७ बर्षे जवानीमा झन् झन् खुल्दै वर्षा (फोटो-फिचर)